Gabadh yar oo isku dayday inay laaluushto Ra’iisul wasaaraha New Zealand | Saxil News Network
Gabadh yar oo isku dayday inay laaluushto Ra’iisul wasaaraha New Zealand
Image captionRa’iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern
Ra’iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa diiday “laaluush” ay gabar yar oo 11 jir ah usoo bandhigtay, kaas oo ay ku dalbaneyso inay hirgeliso xarun lagu baaro maska duula ee loo yaqano Dragon.
Gabadhan oo magaceeda lagu soo koobay Victoria, ayaa waxay dooneysay in la siiyo fursad ay ku tababarto maska duula, maadaamaa ay sheegtay inay leedahay aqoon ku filan.
Warqadan ay usoo dirtay xukumadda Jacinda ayaa ilmahan yar waxay soo raacisay 5 doolar oo lacagta New zealnad ah, lacagtaasi oo lagu tilmaamay inay tahay laaluush ay doonesay inay siiso Jacinda Ardern.
Ra’iisul wasaare Ardern oo u jawaabtay gabadhaas yar ayaa sheegtay in xukumaddeeda “wakhti xaadirkan aysan wadin howla la xidhiidha maska duula ee dragon.”
Inakstoo aanan la garanayn waxa gabadahan yar ku qaaday in arrinkaas ay ku fikirto ayaa haddana waxaa muuqata inay aad u daneneyso maska duula, walow aanan la garanayn sida ay u tababari karto masaska duula oo laga yaaba inay khatar yihiin.
Wa ayo dadka lagu laayay weerarkii masaajidda?
Toogashadii New Zealand: Ra’isulwasaaraha oo caalamka baaq u dirtay
Toogashadii New Zealand: Hoggaamiyaha Austria oo arrin cusub shaaciyay
Is-dhaafsiga farriimaha ayaa waxay marka hore iisu mariyeen bogga Forum Reddit.
Xafiiska Ra’iisul wasaarahana oo BBC-du ay la xiriirta ayaa sheegay in gabadaha yar Ms Ardern ay gabadha yar u jawaabtay 30-ka bisha afaraad ee sanandkan.
Sidoo kale bishi Maarso ayay ahayd markii qof ka mid ah dadka isticmaala barta Twiterka uu warqad usoo qoray Ms Ardern, waxaana jirtay in dad badan oo farriimo usoo diray ay usoo jawaabtay.
“Waxaan Lucy kuu sheegayaa anoo ka duulaya farriinta warqaddaada la socotay inaad tahay gabadh yar oo naxariis badan,” ayey Ms Ardern jawaabta ugu qortay.
Marka ma dooneysaa in lagugu dhiirrgeliyo si aad naxariistaasi aad u sii waddo intaad nooshahay.” ayeyna sii raacisay.